चीनबाट भ्याक्सिन लिन जहाज जाँदै | देश परदेश Desh Paradesh
नेपाली मिति: ०८:१०:२६ बिहान २०७८ माघ ९ गते, आईतवार
चीनबाट भ्याक्सिन लिन जहाज जाँदै
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ नेपाल ल्याउनका लागि भोलिदेखि तीन उडान हुने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बाइडबडी ए ३३० जहाजबाट भोलिदेखि यहि साउन ८ गतेसम्म तीनवटा उडानमार्फत खोप ल्याउन लागिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले चीनबाट भेरोसेल खोप ल्याउनका लागि जहाज त्यसतर्फ जाने बताए । सरकारले सरकार–सरकार (जिटुजी) मार्फत चीनबाट खोप ल्याउन लागेको हो । उनका अनुसार भोलि साँझ निगमको विमान खोप लिनका लागि चीन जादै छ । जहाजले असार २५ गते खोप ल्याउने छ ।
यस्तै असार ३१ गते पुन: बाइडबडी जहाज खोप लिन गएर साउन १ गते तथा साउन ७ गते पुन: जहाज नेपालबाट गएर साउन ८ गते खोप ल्याउने छ । “भोलिदेखि तीन पटक जहाज खोप लिनका लागि चीन जाने छ”, उनले भने, “परिणाम ठूलो आउँछ तर कति आउँछ भन्ने एकिन छैन ।”
उनले पहिलो पटक खोप ल्याइसकेपछि मात्र कति मात्रा खोप नेपाल आएको एकिन थाहा हुने बताए । चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट सरकारले भेरोसेल खोप खरिद गर्न लागेको हो । खोप नेपाल आइसकेपछि ६० वर्ष मुनि उमेर समूहका मानिसलाई प्रथामिकताका आधारमा लगाउने उनको भनाइ रहेको छ ।
यस्तै सरकारलाई कोभ्याक्स सुविधामार्फत समेत छिट्टै खोप ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले ६० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता अनुसार बाँकी खोप दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यसअघि कोभ्याक्समार्फत तीन लाख ४८ हजार मात्र खोप आएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म ४२ लाख ४८ हजार खोप आएको छ । नेपालमा १८ वर्षभन्दा माथिका कुल दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिलेसम्म आठ लाख ५१ हजार ३०० जनालाई दोस्रो मात्रा र २६ लाख ११ हजार ८०७ जनालाई पहिलो मात्राको खोप प्रदान गरिएको छ । रासस
सरकारद्दारा खाडीका मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान रोक
साउदीमा घट्दै छ विदेशीलाई रोजगारी, साउदीकरणका कारण विदेशी श्रमिकको संख्यामा ठूलो कटौति
अव विदेशबाट आउनेहरु क्वारेण्टीन बस्नुपर्ने, एकैदिन १० हजार बढीमा कोभिड संक्रमण
श्रम मन्त्री श्रेष्ठका सय दिन, प्रधानमन्त्रीकै शैली, सुस्त गति
एनआरएनएका पदाधिकारीको निर्वाचन फेब्रुअरी २८ मा हुने
ओमिक्रोनमा कस्तो मास्क प्रभावकारी ?
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं ३० पुष २०७८, शुक्रबार
कतारमा विश्वकप फुटवलका लागि फाइनल खेल हुने रंगशाला लगभग तयार
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं ४ आश्विन २०७८, सोमबार
आठ महिनामा ६६ हजार बढी विदेशी पर्यटक भित्रिए
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं १९ भाद्र २०७८, शनिबार
दक्षिण कोरियामा सुरु भयो कोभिडको चौथो वेभ
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं २४ असार २०७८, बिहीबार